Ku dhawaad 100 shabaab ah oo lagu dilay weerarkii Baar Sanguuni – Somali Top News
1000 Qof oo USA ugu dhintay Coronavirus 24 Saac Gudahood
Mareykanka oo 7 Milyan oo Doller ugu deeqay Soomaaliya si cudurka Coronovirus uga hor tagto
Somali PM Welcomes Paris Club’s Debt Burden By $1.4 Billion
Kheyre: Awoodda dawladnimo oo dhan ayaan u isticmaali doonnaa si aan ummaddeenna uga badbaadinno saameeynta cudurka Carona
Ku dhawaad 100 shabaab ah oo lagu dilay weerarkii Baar Sanguuni
Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay dagaal saaka waabarigii Al shabaab ku qaadeen Saldhig ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baar-Sanguuni ee duleedka Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiil u hadashay Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in weerarku ku bilaawday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay ayna fashiliyeen, isla markaana ciidanka Jubbaland ay qarxiyeen gaari Qaraxa waday sida ay hadalka u dhigeen.
Jubbaland ayaa sheegatay in ay ka dileen Al shabaabkii weerarka soo qaaday 73 kamida sidoo kalana ay gubeen gawaari ay Shabaab lahaayeen sida ay sheegeen Saraakiisha Ciidanka Jubbaland.
Dhanka kale Al Shabaab oo weerarkaan uga hadlay Baraha ay warkooda ku faayaan ayaa sheegtay in lawareegeen Xarada Ciidanka Jubbaland ee Baar-Sanguuni ayna ka qaateen Saanad Milatari oo saldhiga taalay.
Majirto Cid ka madax banaan sheegashada Jubbaland iyo Al Shabaab oo Xaqiijisay Khasaaraha kala gaaray labbada dhinac iyo sheegashooda.
← Pirate attacks in the Gulf of Guinea increase
Rag loo heysto weerarkii DusitD2 oo maxkamad la soo taagay →
Khilaaf iyo is qabqabsi ka dhex jira wasaaradda maaliyadda oo soo shaac baxay (AKHRISO)
July 17, 2018 July 17, 2018 Somali Top News 0
November 10, 2019 Somali Top News 0